Idozi wdg Njehie | Wondershare
Wondershare 1-Click PC Care N'ihi Windows
Adị n'elu gị PC, idozi PC nsogbu ma na-free nke ihe mgbu nke na-emeso a ngwa ngwa PC.
Lee otú ọ na-arụ ọrụ
Nnyocha Guide Tech Spec Nyocha (14)
Zuru ugbu a $49.95
Gbalịa ya Free
Bụ gị PC ngwa ngwa, na-ejighị n'aka, na ngwangwa ọgụ? Elegharala Ọ!
Kasị ngwa ngwa kọmputa na-emetụta dị iche iche zoro ezo Windows njehie. Mbụ ha na-amalite iji nwayọọ na-, mgbe ahụ, ifriizi elu mgbe ụfọdụ, ruo mgbe otu ụbọchị ha dị nnọọ ugboelu niile na mberede.
Wondershare 1-Click PC Care, A dị ike PC akụ elu ịba uru ka akụ gị PC ka gị PC na-agba ọsọ dị ka ọhụrụ ọzọ. Nke a PC n'iji ya gee ntị software bụ ike akpaaka ịchọpụta na idozi PC slowdowns, hichapụ junk faịlụ, ebuli kọmputa arụmọrụ, adị n'elu PC, zọọ unu si hassle nke kọmputa freezes na mkpọka, chebe nzuzo gị, wdg Iji nweta a ngwa ngwa, anụ na ala na kọmputa, niile ị chọrọ bụ 1 Pịa.
Olee otú Idozi wdg Njehie
'Nso nso m annoyed na kọmputa m, n'ihi na mgbe ọ na-abịa gafee wdg njehie. Ọ dịghị mgbe m zutere ya n'ihu. Olee otú idozi wdg njehie? '. Ná ndụ kwa ụbọchị anyị ndusụk ezute nsogbu yiri nke ahụ. Ọ bụ ezie na wdg njehie bụ ụdị nke obi nkoropụ, gwara wdg njehie bụghị ike ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a ezi ụzọ. Tupu anyị maara otú idozi wdg njehie, anyị kwesịrị mbụ maara ihe wdg bụ na otú ọ ọrụ. Gịnị bụ ahụkarị akpata dị otú ahụ njehie na otú anyị nwere ike idozi wdg. Mụtakwuo >>
Ọtụtụ kọmputa ọrụ sụọ ngọngọ n'elu ndị a ozi dị ka 'na-efu wdg faịlụ'. Ị nwere ike reinstall Windows izere ozi popping ọzọ, ma ọ na-eme na-abịa elu oge ọ bụla mgbe ị na-Malitegharịa ekwentị na kọmputa. Mgbe ahụ, olee idozi efu wdg faịlụ?
Oge ojiri gaa njehie bụ ndị kasị Windows njehie nke ị ga-ezute. Oge ojiri gaa njehie na kọmputa gị nwere ike ịbịa na ọtụtụ ụdị dị iche iche. Dị iche iche nke Oge ojiri gaa njehie-adabere na dị iche iche na-akpata. Mụtakwuo >>
Wdg Initialization Okpu? Ihe i kwesịrị ime?
Mgbe ọ bụla m mechie Windows, m ga-esi ozi a: "dwwin.exe - wdg Initialization Okpu -Ndị ngwa-emeghị initialize n'ihi na window ojii na-mechisịrị ọnụ ala." The ozi Pop elu ngwa ngwa na kpamkpam nanị n'oge shutdown. Olee otú dozie nsogbu a?
Ị nwere ike na-ata ahụhụ yiri nsogbu mgbe ị malite ma ọ bụ usoro mechie usoro kpere. Tupu achọta ihe ngwọta, ọ ka mma ịmata ihe Dwwin.exe bụ. Mụtakwuo >>
Prevent Computer freezes & mkpọka
Emejuputara idozi dị iche iche usoro njehie, usoro esemokwu na mis-nhazi.
- Ozugbo idozi PC njehie..
- Iṅomi ma ịrụzi Windows ndekọ njehie.
Speed ​​Up na idozi Your PC na dị nnọọ 1 Pịa!
Ihe na-n'ime A Audio toolbox? Ahịa anyị Na 1-Click PC Care - na ị ga-, Oke
Dị ka ndị ọzọ m gbalịrị ọtụtụ ngwaahịa & ha ka m ala. 1-click pc elekọta gbagwojuru ha nile, ugboro 10 n'elu. Ugbu a, m egwuregwu adịghị okuku, ifriizi ma ọ bụ kwụsịtụ. CHAỊ!! Ọ fixes ihe niile.
Ọ ga-họrọ ụfọdụ ihe m chọrọ idozi?
mere eme 1-Click PC Care ka na-egosi otu junk faịlụ na ize ndụ ọnọdụ?
Gịnị mere na ọ ka na-e scanned si nza nke njehie iji ọzọ ngwaahịa?
Mere Idozi Ugbu a bọtịnụ bụ isi awọ?
Nweta nkwalite N'uba
Olee otú ọsọ Up Your Internet Njikọ
Olee otú Hichapụ / Doro Anya Cache na Kuki na 1 Pịa
Speed ​​Up Computer
Idozi Windows Error
Naghachi dị iche iche faịlụ na 550+ formats site na kọmputa gị nchekwa ngwaọrụ ngwa ngwa, n'enweghị kpam. Mụtakwuo
A ọkachamara data mgbake ngwá ọrụ akpan iji naghachi ehichapụ photos, video na ọdịyo faịlụ si dị iche iche nchekwa ngwaọrụ. Mụtakwuo
Comprehensive Mac data mgbake software naghachi furu efu Mac data ngwa ngwa, n'enweghị nsogbu na juputara. Mụtakwuo